Lalaon’ny Nosy: natsaraina ny fampivondronana ireo atleta | NewsMada
Lalaon’ny Nosy: natsaraina ny fampivondronana ireo atleta
Par Taratra sur 22/06/2019
Iray volana mialohan’ny hiatrehana ny lalaon’ny Nosy izay hatao any Maorisy, mandeha tsara ary mizotra araka ny tokony ho izy ny fampivondronana ireo atleta, eo amin’ny taranja rehetra handraisan’ny Malagasy anjara. Tsy very anjara fa mahazo izay rehetra tokony hilaina ireo atleta manoman-tena eto an-tanindrazana, ampitoviana tanteraka amin’ireo 60 mianadahy manaraka fiofanana any Sina, raha ny fanazavana nentin’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena.
Araka ny nambaran’ny ankamaroan’ireo ankizy teny anivon’ny toerana hipetrahany tsirairay avy, tsy misy ny olana hatreto ary manamora ny fanaovana fanomanan-tena tsara ny fepetra rehetra nomen’ny Ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena.
Raha oharina ny tamin’ny tapany voalohany, nisy ny fanatsarana tamin’ity tapany faharoa amin’ny fampivondronana ity. Anisan’izany ny fametrahana ireo atleta amin’ny hotely manakaiky ny toerana hanaovana ny fanazaran-tena. Toy ny an’ny atletisma, eny amin’ny hotely lehibe eny Alarobia ihany izy ireo ny mipetraka izay akaiky ny kianjan’Alarobia. Torak’izany koa ny taranja boxe, volley ball sy basikety lehilahy izay mipetraka eny amin’ny M Hotel Ampefiloha ary mikotrana ao amin’ny Akademia Nasionaly Ampefiloha ihany.
Misy kosa ny fandaminana napetraka ho an’ireo mipetraka eny amin’ny Mada Espace Bypass izay mikotrana somary lavidavitra, miainga maraina eny izy ireo, misakafo antoandro eny amin’ny toerana manakaiky ny fikotranana ary ny hariva vao mody, hialana amin’ny fivezivezena. Ho an’ny taranja fibatana fonjamby, ohatra, ao amin’ny Akademia Nasionaly Ampefiloha izy ireo no mikotrana , avy eo misakafo eny amin’ny M Hotel Ampefiloha ary ny hariva mamonjy fodiana eny amin’ny Mada Espace Bypass. Misy hatrany moa ny fiara manokana mitatitra azy ireo amin’izany.
Misakafo tsara ara-dalana ihany koa ireto atleta ireto ary efa misy ny tompon’andraikitra napetraka hanara-maso sy hiantoka ny fahasalamana ary ny fitandroana ny loza mety hitranga eny amin’ny “site” tsirairay avy. Tsiahivina, ho an’ny taranja lomano, any Toamasina no miatrika ny fampivondronana ireo atleta hiatrika ny lalaon’ny Nosy.
Midina ifotony mihitsy ny MJS
Ampy fanaraha-maso tsara ireto atleta ireto satria tena midina ifotony mihitsy manara-maso ny avy eo anivon’ny MJS. Miezaka mamaha ihany koa izay mety ho olana sedrain’ny atleta tsirairay. Tranga nisy teny amin’ny Mada Espace, ny olana teo amin’ny rano ary efa voavaha, omaly ihany izany, avy hatrany dia nafindra toerana ireo atleta ireo hisorohana ny mety ho korontana ka hampisy fiantraikany amin’ny fanomanan-tena izay ataony, raha ny fanazavana hatrany.